Isimiso esisebenzayo se-colloid mill sigunda ukugaya nokusheshisa okukhulu. Ukugaya kuncike ekuhambeni okuhambisanayo kwezindawo ezimbili zamazinyo, okunye okuzungeza ngejubane elikhulu kanti okunye kumile, ukuze into edlula ezindaweni zamazinyo ibhekane namandla amakhulu okushefa namandla okuxubana. Ngasikhathi sinye, ngaphansi kwesenzo samandla ayinkimbinkimbi njengokuvama kwemvamisa ephezulu kanye ne-vortex yesivinini esikhulu, okokusebenza kungasakazwa ngempumelelo, kuqiniswe emulsified, kucindezelwe futhi kwenziwe i-homogenized.
I-JINGYE Colloidal Mill uhlobo oluthile lwemishini yokugaya kahle oketshezi noketshezi olungenamanzi.
1. Imboni yokudla: amakinati, i-sesame, u-ayisikhilimu, ukhilimu, ujamu, ujusi wezithelo, ubhontshisi wesoya, isosi yesoya, unamathisela ubhontshisi, ubisi lwamantongomane, ubisi lwe-protein, ubisi lwe-soy, imikhiqizo yobisi, njll.
2. Amakhemikhali ansuku zonke: umuthi wokuxubha, okokuhlanza, i-shampoo, isicwecwe sezicathulo, izimonyo, i-bath essence, insipho, i-balm, njll.
3. Imboni yamakhemikhali: upende, imibala, idayi, ukumboza, uwoyela wokuthambisa, uwoyela, uwoyela kadizili, i-petroleum catalyst, i-asphalt ene-emulsified, ama-adhesives, ama-detergents, ama-plastiki, ingilazi yefayibha eqiniswe ngepulasitiki, isikhumba, i-emulsification, njll.
I-1.Model: Uchungechunge lwe-JYJML, uhlobo oluqondile; I-JYJMF, uhlobo oluhlukanisiwe;
5.Isivinini sokuxuba: 2800rpm;
6.Umsebenzi: emulsification, ukuhlakazwa, homogenization & kwasani;
Umshini usebenzisa izinto ezingenansimbi, ngokuhambisana ne-GMP ejwayelekile, ukuqinisekisa ukuphepha kokudla kanye nempilo.
Ukusebenza okuqinile kwe-2.Stable, ukushisa okuhle kokushisa, kungaba ukugaya okuhle, ukuqinisekisa ukuthi ubuhle bomkhiqizo buhlangabezana nezidingo.
Umklamo womkhiqizo muhle, ukusebenza kulula, ukuhlanza kulula, kudala ukusebenza kahle kokukhiqiza kwekhasimende.
Icubungula ubuhle (um)